I-china i-3D fiberglass yelaphu yelaphu kunye nabathengisi | Beihai Fibreglass
Fiberglass umphezulu Tissue Mat
Ilaphu leFiberglass ye-3D
Iphaneli ye-3D FRP enentlaka
Ilaphu leCarbon Fibre esebenzayo
Ilaphu le-3-D spacer linezinto ezimbini ezenziwe nge-bi-directional ephothiweyo yelaphu, edityaniswe ngoomatshini ngemfumba ephothiweyo.
Kwaye iimfumba ezimbini ezimilise ngo-S zidibanisa ukwenza intsika, ezimilise okwe-8 kwicala le-warp kunye ne-1 emile kwicala le-weft.
Ilaphu le-3-D spacer linezinto ezimbini ezenziwe nge-bi-directional ephothiweyo yelaphu, edityaniswe ngoomatshini ngemfumba ephothiweyo. Kwaye iimfumba ezimbini ezimilise ngo-S zidibanisa ukwenza intsika, ezimilise okwe-8 kwicala le-warp kunye ne-1 emile kwicala le-weft.
Ilaphu le-3-D spacer lingenziwa ngeglasi yefayibha, icarbon fiber okanye i-basalt fiber. Kwaye amalaphu abo e-hybrid anokuveliswa.
Uluhlu ntsika ukuphakama: 3-50 mm, uluhlu ububanzi: 0003000 mm.
Uyilo lweeparamitha zesakhiwo kubandakanya ubungakanani be-areal, ukuphakama kunye nokuhanjiswa kweentsika kuyatshintsha.
I-3-D spacer yelaphu edityanisiweyo inokubonelela ngoxinzelelo oluphezulu lokuthintela ulusu kunye nefuthe lokumelana nefuthe kunye nokuchasana nefuthe, ubunzima bokukhanya. ukuqina okuphezulu, ubushushu obugqwesileyo be-thermal, ukuthambisa i-acoustic, njalo njalo.
Iinkcukacha ze-3D zeFiberglass ephothiweyo
Ubunzima bommandla (g / m2)
Ukutyeba Core (mm)
Ubuninzi beWarp (iphela / cm)
Ubuninzi beWef (ukuphela / cm)
Tensile Warp (n / 50mm)
Qina Weft (n / 50mm)
FAQ of Beihai 3D fiberglass 3D ngelaphu ephothiweyo
1) Ndingazongeza njani ezinye izaleko kunye nezinye izinto kwilaphu leBhaihai3D?
Unokufaka ezinye izinto (i-CSM, ukujikeleza, igwebu njlnjl.) Kumanzi kumanzi kwilaphu leBhaihai 3D. Ukuya kuthi ga kwi-3 mm yeglasi inokuqengqeleka kwi-Beihai 3D emanzi ngaphambi kokuphela kwexesha-eligqityiweyo kwaye amandla e-back-back apheleleyo aya kuqinisekiswa. Emva kokuba iileyile zexesha le-gel zobukhulu obuphezulu zinokulaminishwa.
2) Ufaka njani ii-laminates zokuhombisa (umzkl.i-HPL Prints) kwi-Beihai 3D amalaphu?
Amacwecwe okuhombisa anokusetyenziswa kwicala lokungunda kunye nelaphu lilaminishwe ngokuthe ngqo ngaphezulu kwelaminethi okanye iileyile zokuhombisa zinokuqengqelwa phezu kwelaphu elimanzi le-Beihai 3D.
3) Uyenza njani i-engile okanye igophe nge-Beihai 3D?
Olunye uncedo lwe-Beihai 3D kukuba inokwakheka ngokupheleleyo kwaye iyahonjiswa. Songa nje ilaphu kwi-engile oyifunayo okanye kwigophe ekubunjeni nasekuqengqeleni kakuhle.
4) Ndingenza njani umbala we-Beihai 3D laminate?
Ngokufaka imibala kwi-resin (ukongeza i-pigment kuyo)
5) Ndingawufumana njani umphezulu ogudileyo kwi-Beihai 3D laminates njengomphezulu ogudileyo kwiisampulu zakho?
Umphezulu ogudileyo weesampulu ufuna ukungunda okuluxekileyo, okt iglasi okanye melamine. Ukuze ufumane umphezulu egudileyo kumacala omabini, ungafaka isicelo sokubumba okujiweyo okwesibini (ukubumba ukubumba) kwi-Beihai 3D emanzi, kuthathelwa ingqalelo ukutyeba kwelaphu.
6) Ndingaqiniseka njani ukuba ilaphu leBhaihai 3D lifakwe ngokupheleleyo?
Unokwazi ngokulula ngenqanaba lokungafihli ukuba i-Beihai 3D imanziwe ngokufanelekileyo. Gwema indawo ezigcweleyo (ukubandakanywa) ngokumane uqengqa i-resin egqithisileyo kumda- nangaphandle kwelaphu. Oku kuyakushiya inani elifanelekileyo le-resin esele kwilaphu.
7) Ndingakuphepha njani ukuprinta kwi-gelcoat ye-Beihai 3D?
Kwizicelo ezininzi, ikhuselo elilula okanye umaleko we-CSM wanele.
Ukusetyenziswa okubonakalayo okubaluleke kakhulu, ungasebenzisa ingubo yokuthintela yokuprinta.
• Enye indlela kukuvumela ulusu lwangaphandle lunyange ngaphambi kokuba wongeze i-Beihai 3D.
8) ndingakuqinisekisa njani ukungaguquki kwe-Beihai 3D laminate?
Ukuguquguquka sisiphumo sombala we-resin, nxibelelana nomthengisi wakho we-resin.
9) Siyintoni isizathu sokunyuka (kwentwasahlobo umva) umthamo welaphu leBhaihai 3D?
I-Beihai 3D Glass amalaphu ziyilwe ngobuchule ngeenxa zonke iimpawu zendalo zeglasi. Iglasi inokuthi 'igobe' kodwa ayinakuba 'yikrelekrele' Khawufane ucinge yonke le mithombo kulo lonke elaminethi ityhalela ngaphandle abadlali, i-resin ivuselela eli nyathelo (libizwa ngokuba yi-capillarity).
10) Ilaphu le-Beihai 3D alinyangi ngokwaneleyo, kufuneka ndenze ntoni?
Izisombululo ezibini ezinokubakho
1) Xa usebenza nentlaka eziqukethe i-styrene, ukubanjwa kwe-styrene eguqukayo kunye ne-Beihai 3D ekhulelweyo kunokubangela ukunyanga. Uhlobo lwe-resin (i-LSE) ephantsi (i-LSE) yohlobo lwentlaka okanye kungenjalo kongezwe isinciphisi sokukhupha istayrene (umz.I-Byk S-740 yepolyester kunye neByk S-750) kwi-resin iyacetyiswa.
I-2) Ukuhlawula amatyala asezantsi e-resin kwaye kunciphise ubushushu bokuphilisa kwimisonto ethe nkqo, unyango oluchanekileyo luyacetyiswa. Oku kunokufezekiswa ngokwanda kwenqanaba lokukhuthaza kunye nenqanaba elonyukayo (kukhethwa i-catalyst) ibuyekezwe ngesithinteli ukuseta ixesha lejeli.
11) ndingawuthintela njani umonakalo kumgangatho womgangatho we-Beihai 3D (imibimbi kunye nezibaya kubadlali be-decklayers)?
Ukugcina kubalulekile ekuqinisekiseni umgangatho: gcina imiqolo ngokuthe tye kwindawo eyomileyo kubushushu obuqhelekileyo vula ilaphu ngokulinganayo kwaye ungalisongeli ilaphu.
• Iisonga: ungasusa iifolokhwe ngokushenxisa ngokulula iroli kude nesizi xa usonga ecaleni kwayo
• Imibimbi: ukuziqengqa ngobunono phezu kombimbi kuya kubangela ukuba unyamalale
Egqithileyo Iphaneli ye-3D FRP enentlaka
Okulandelayo: Elukiweyo combo combo Mat
3d fiberglass ephothiweyo Ilaphu
Ilaphu eliphothiweyo le-3d
3d womluki Glass Fibre Ilaphu